Alexis Sanchez Oo Ka Hadlay Mustaqbalkiisa Arsenal & Ololaha Ka Dhanka Ah Tababare Arsene Wenger - Laacib.net
Alexis Sanchez Oo Ka Hadlay Mustaqbalkiisa Arsenal & Ololaha Ka Dhanka Ah Tababare Arsene Wenger
Alexis Sanchez ayaa si dahsoon uga hadlay inuu isaga tagi doono Arsenal xagaagan laakiin waxa uu si weyn u difaacay tababarihiisa Arsene Wenger.
Weeraryahan Sanchez ayaa qirtay inuu mustaqbalkiisa go’aansan doono dhamaadka xilli ciyaareedka, waxaana la rumeysan yahay inuu bixi doono haddii Gunners ay ku hungowdo inay xaqiijisato booskooda caadiga ahaa ee Champions League.
Laakiin 28 jirkaan ayaa sidoo kale sheegay inay tahay wax aad u xun in taageerayaasha ay sameynayaan mudaharaadyo ka dhan ah Wenger islamarkaana ay ugu baaqayaan inuu baxo xagaaga marka uu qandaraaskiisa dhaco.
Sanchez ayaa waxaa lacag badan ku doonaya kooxaha Manchester City, Paris Saint-Germain iyo Bayern Munich, waxaana rajadooda ay sarre u kici doontaa haddii Arsenal ay seegto afarta sarre, waxa ay ku qasban yihiin inay ka badiyaan Everton kulankooda ugu danbeeya ee xilli ciyaareedka waana inay ku duceystaan in kooxda u laabatay heerka labaad ee Middlesbrough ay ku dhegto Liverpool kulanka Anfield.
Arsenal ayaa u soo bandhigtay Sanchez qandaraas cusub oo uu isbuucii ku qaadanayo 250 kun ginni, laakiin waxa ay u badan tahay inuu baxayo xagaagan.
Sanchez ayaa yiri: “Idiinma sheegi karo mustaqbalkeyga haatan. Waa qasab inaan sugno ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedka. Sida aan mar walba sheego, aniga iguma xirna. Waxa ay ku xiran tahay kooxda. Waxa ay jecel yihiin iyo waxa aysan jecleyn.
“Waxaan sheegaa mar walba: inaan isku dayo inaan qabto shaqadeyda ugu fiican, inaan caawiyo kooxda, inaan goolal dhaliyo, inaan guulal soo hooyo. Waana arki doonaa ugu danbeyn. Haddii ay jecel yihiin inaan sii wado ama haddii aysan jecleyn. Wax walba oo ay jecel yihiin waxaan arki doonaa dhamaadka xilli ciyaareedka.”
Sanchez ayaa sidoo kale difaacay Wenger, laakiin waxa uu sheegay in Arsenal ay horumar sameyn doonto haddii ay xagaaga ciyaartoy soo iibsadaan.
Waxa uu yiri: “Waa wax caadi ah. Waxaan qabaa in koox walba ay mar walba soo iibsato ciyaartoy badan. Barca, Real Madrid, Bayern waxa ay mar walba soo iibsadaan ciyaartoy badan, waxaana qabaa inaan heli karno fursad aan ku soo iibsano ciyaartoy badan oo aan ku sii xooganaano maalin walba.
“Waxay ila tahay in mudaharaadka ay sameynayaan taageerayaasha uu yahay mid aad u xun. Waa tababarihii garoonka u dhisay kooxda, koobab u qaaday, waxaana uu shaqada hayay 21 sannadood. Waa aas-aasaha garoonka, ciyaartoyda iyo qaabka ay u dhisan tahay kooxda.”